महन्थ ठाकूरसँग प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो गोप्य सहमति भएछ « Ok Janata Newsportal
महन्थ ठाकूरसँग प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो गोप्य सहमति भएछ
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल यतिबेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । वर्तमान सरकार जोगाउन, नयाँ सरकार बनाउने र मुलुकलाई मध्यावधिमा लिएर जानेजस्ता विभिन्न राजनीतिक विकल्पको चाबी जसपाको हातमा छ ।
सत्ताको रस्साकस्सीका लागि भेटवार्ताले तीव्रता पाइरहेको छ । जसपामा पनि अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच सत्ता समीकरणबारे एकमत छैन । ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन् भने यादव ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकूरका अनुसार तीन दलका नेतासँग हाम्रो पटक–पटक भेटघाट भएको छ । कहिले एक्लै, कहिले दुईजना, कहिले पाँचजना सँगै बसेर कुराकानी भइरहेको छ । सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ओलीजी (केपी शर्मा ओली) सँग कुराकानी भएको हो । ओलीजी सरकारमा हुनुहुन्छ ।
पहिला पनि उहाँ सरकारमा हुँदा संविधान संशोधन, नागरिकता, भाषा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी र हामीहरुमाथि भएका मुद्दाका विषयमा उहाँहरु सहमत नै हुनुहुन्थ्यो । लिखित रुपमा पनि पत्र आदानप्रदान भएकै हो । हाम्रो दुईवटा प्रमुख मुद्दा छन्, एउटा टीकापुर घटनाको र अर्को महोत्तरीको जलेश्वर घटना प्रमुख हो । अरु साना साना मुद्दाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छन् । कतिपय मुद्दाको फैसला पनि भइसक्यो ।
चुनाव भन्दा अगाडि दुवैतर्फबाट टास्कफोर्स बनेको थियो । कति मुद्दा छन्, कति जनामाथि मुद्दा चल्यो भनेर गरिएको अध्ययनमा करिब १२ सय जनामाथि मुद्दा देखिन्छ । यी सबै मुद्दा एकसाथ फिर्ता लिने र राजबन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । नागरिकताको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ । ‘हाम्रा मागलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्नुभएको छैन । यो त वास्तवमा देशको समस्या हो, तर यो मधेसको मात्र हो भन्ने प्रश्न आउँछ क्या ! मधेसले बारम्बार आवाज उठाएका कारण यसलाई मधेसको समस्याका रुपमा बुझिएको छ । यसको समाधानका लागि सबै सहमत हुनुहुन्छ । अर्को, हाम्रो सांसद रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई सपथ ग्रहण पनि गराइयो । तर उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ । यसका साथै त्यही मुद्दामा अरु पनि जेल परेका छन् ।’
लोकतन्त्र खतरामा छ भन्छन् तर मधेसमा खै लोकतन्त्र ? मधेसमा लोकतन्त्र छ ? सामान्य जुलुस प्रदर्शन गर्दा र धर्नामा बस्दा मानिसले गोली खाएका छन् । एउटा मानिसको मूल्य दश लाख हो ? गोली हानेर मार्दा दश लाख लिन्छ, अरु के गर्छ र भन्ने सोचले गोली चलाएको छ । अत्याचार भएको छ । घरमा घुसेर महिलामाथि हातपात भएको छ । संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको छ । संस्कृतिमाथि आक्रमण हुँदा भगवानले पनि माफी दिनुहुन्न । हामीमाथि यस्तो किसिमको आक्रमण भएको छ । यो सुन्दा पीडा हुन्छ । यो कसले ग¥यो त ? हाम्रै सरकारले गरेको हो । कुनै विदेशी सरकारले गरेको होइन । गोली लागेर मर्नेको परिवारले केही नपाउने र गोली चलाएर मार्नेले प्रमोशन पाउने ? विभेद त प्रस्टै देखिन्छ नि !
उहाँको तीन प्रस्ताव थियो । पहिलो, सरकारमा आउनुहोस्, मिलेर जाउँला । दोस्रो, सरकारमा आउन चाहनुहुन्न भने बाहिरैबाट हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् । त्यो पनि भएन भने तपाईं अरुसँग पनि नजानुहोस् । तटस्थ बस्नुहोस् । तर हामीले हाम्रो एजेण्डा सम्बोधन भएपछि निर्णय गर्छौं भनेर भनेका छौं ।